Oge akara aka: Usoro nhazi oge niile maka azụmahịa gị Martech Zone
Oge akara: Usoro ihe omume niile na ntanetị maka azụmahịa gị
Saturday, October 24, 2020 Fraịde, Ọktọba 23, 2020 Douglas Karr
Ulo oru a nke nwere onyinye nke ndi oru a na-acho mgbe nile ka ha gha eme ka odi nfe ka ndi ahia zuta oru ha ma obu chebe oge ha. Oge ịhazi usoro ihe omume dị ka Oge akara bụ ụzọ na-enweghị ntụpọ iji mezuo nke a ebe ị nwere ike ịnye ndozi na ngbanwe nke ntinye akwụkwọ ntanetị 24 × 7 tinyere uru agbakwunyere nke ịkwụ ụgwọ ntanetị n'ịntanetị, ozi ntinye akwụkwọ ozugbo, na ntinye akwụkwọ abụọ.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ngwa ọrụ niile dị ka Oge akara nwekwara ike inyere gị aka ijikwa azụmahịa gị nke ọma, nyochaa nrụpụta ọrụ ndị ọrụ, ma bulie azụmaahịa gị na njirimara azụmaahịa ziri ezi.
Oge akara akara usoro ihe omume: Ngwọta ngwọta
Oge akara bụ nghazi usoro ịhazi usoro ntanetị nke na-enye usoro ikpo okwu dị mfe maka ntinye akwụkwọ n'ịntanetị, na ncheta akpaaka, nhazi ịkwụ ụgwọ, ngwa mkpanaka, na ọtụtụ ndị ọzọ! Ọ na - enyere gị aka ijikwa ma bulie azụmaahịa gị site na inweta ndị ahịa ọhụụ na ijide ndị dị ugbu a.
Ihe karịrị ndị nwe azụmaahịa 200,000 sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche dịka nkuzi, salon, spa, ahụike na ahụike, ọrụ ndị ọkachamara, gọọmentị na ngalaba nkeonwe, ụlọ ọrụ ahụike, arụmọrụ azụmaahịa, yana otu, wdg - tụkwasịrị obi na Oge.
Oge akara enyere azụmahịa gị aka na uru ndị a:
24 × 7 Ndenye Ntanetị
Na Oge, ndị ahịa gị nwere ike ịhazi oge ị ga-eji na-eme nchọnchọ. Ọ dị ka onye nnabata 24 reception 7, nke na-ejikwa oge gị ma chebe gị site na nsogbu nke iji aka gị tinye akwụkwọ ikike iji ekwentị ma ọ bụ email. Ndị ahịa nwere ike ịnweta ibe ntinye akwụkwọ gị ka mma ha. Ọzọkwa, ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere oge ị ga-ede akwụkwọ na-efu n'èzí oge azụmahịa gị!
Ndị ahịa gị nwere ike ịhazi oge nke ọma na usoro ntinye akwụkwọ dị mfe. Mgbe achọrọ ha, ha nwere ike ịkagbu ma ọ bụ gbanwee oge ha ga-eme ihe n’obere oge! Oge akara na-enye gị ohere ịhazie akwụkwọ ntinye akwụkwọ gị iji kwekọọ na akara ngosi gị.
Ọgbọ Multi-Channel Lead Generation
Mee ka ọhụhụ azụmaahịa gị dị na ntanetị wee nọrọ ebe ndị ahịa gị nọ - Google, Facebook ma ọ bụ Instagram! Oge ntinye akwụkwọ nke ntinye aka nke Appointy na enyere gi aka inweta ike nke mgbasa ozi iji mee ka ị nwekwuo ndị ahịa.
Site na Oge, ị nwere ike itinye bọtịnụ 'Book Now' na Google MyBusiness, Facebook, na Instagram iji mee ka ndị ọbịa profaịlụ na-arụ ọrụ nke ọma na-akwụ ndị ahịa ụgwọ. Akwụkwọ a ugbu a ga - eme ka ndị ọbịa profaịlụ ịtọlite ​​oge ọhụhụ na azụmaahịa gị n'ime ngwa ahụ.
Iji Ndabere anyị na mwekota nke Google, ndị ahịa gị nwere ike ịchọpụta ma debe gị ozugbo na weebụsaịtị Google Search, Maps na weebụsaịtị RwG. N'ụzọ dị otu a, ị ga - ewepụta ndị ahịa ọhụụ ọ bụla akwụghị ụgwọ ọ bụla!
Enweghị ihe ngosi
Oge akara aka na-ahapụ gị izipu ihe ncheta site na email na SMS gị ahịa tupu oru iji belata dịghị-egosi na ikpeazụ nkeji-cancelations. Ndị ahịa gị nwere ike ịhazi oge ọzọ ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịme ya ma ọ bụ gwa ya tupu oge eruo ka ị nwee ike mejupụta oghere efu ma ghara ịlafu ego ọ bụla.
Oge akara aka jikọtara na ngwa ịkwụ ụgwọ a ma ama dịka Paypal, Stripe, Square iji nye nhọrọ ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa maka ndị ahịa n'oge ntinye akwụkwọ ma ọ bụ ndenye ọpụpụ.
Nwere ike ịhọrọ ịnabata ịkwụ ụgwọ zuru ezu, ele mmadụ anya n'ihu, ma ọ bụ enweghị n'ịntanetị n'oge ịde akwụkwọ. Aykwụ ụgwọ ịntanetị nwere ike inyere gị aka izere ịdebanye aha nkịtị ma nye nchedo ịkagbu.
Ndokwa nke Square POS mwekota na-akpaghị aka na-ejuputa nhọpụta nkọwa ma hụ na ọ ga - eme ka ọpụpụ gị were dị ngwa.
Real oge usoro ihe omume Kalinda
Oge kalịnda nke oge ga-enye gị ohere ịlele usoro oge nke gị n'otu oge, yana ọtụtụ usoro ọrụ ndị ọrụ n'otu ihuenyo. Chọpụta oghere ọ bụla ma mejupụta oghere efu maka njikwa oge.
You nwere ike ịgbanwe nnweta gị oge ọ bụla site na kalenda. Ọzọkwa, ọ na - enye gị ohere ịgbanwe oge dị mfe site na ịdọrọ na dobe njirimara.
Oge akara na-akwado mmekọrịta ụzọ abụọ na kalenda ndị ama ama ma ọ bụ kalenda ọkachamara dị ka Google Cal, iCal, Outlook, na ndị ọzọ ka ị nwee ike ịnọ mgbe niile na usoro ụbọchị gị.
Ndị ọrụ na ndị ahịa ahịa
Oge akara na-enye gị ohere inye ndị ọrụ gị nzere nbanye nke onwe ha, nke na-enye ha ohere ịchịkwa usoro oge ha, nnweta, na epupụta. Ọ na - enyere gị aka ijikwa ndị ọrụ gị nke ọma, site na ịhọpụta nhọpụta nye ndị na - enweghị ego / kachasị akụ na ụba, ma na - eme ka arụpụta ihe.
Oge akara CRM na-ahapụ gị na ndị ọrụ gị nyefee ahụmịhe nke onwe gị site na ịchụso omume ha. Echekwa mkpa nkọwa dị ka oriri ụdị Ibọrọ, oru oru, zuo akụkọ ihe mere eme, na ndetu na ndị ọzọ na otu ebe.
I nwekwara ike jiri ọgụgụ isi chịkọta ndị ahịa gị dabere na njirimara ndị bụ isi dị ka ọrụ, nzaghachi na iguzosi ike n'ihe iji lekwasị anya na ndị ahịa ziri ezi ma na-eme ka mgbalị gị n'ụzọ dị irè.
Iji oge ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ maka ntinye akwụkwọ, ị nwere ike ijikwa azụmahịa gị niile na ekwentị gị. Jikwaa usoro ihe omume, ịkwụ ụgwọ, kalenda ndị ọrụ, nhọpụta, na ọtụtụ ndị ọzọ site na ngwa ahụ na ọ laa.
Njikọ oge na Zoom na-ahapụ gị ka ịhazi oge ịntanetị, nzukọ ndị dịpụrụ adịpụ, nzukọ, klaasị nka, ma ọ bụ webinars. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịgbasawanye azụmaahịa azụmahịa gị na mpaghara oge dị iche iche, n'ụwa niile.
Akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọ bụla na - ewepụta njikọ nzukọ Mbugharị yana klaasị ma ọ bụ nnọkọ na-akpaghị aka na kalenda gị.
A na-egosipụta nkọwapụta nke akara ngosi ahụ na ibe nkwenye ntinye akwụkwọ, ma zigara email / nkwenye ederede na akpaaka na ọkwa ncheta maka ndị niile sonyere. Isonyere, ahịa nwere nnọọ pịa bia njikọ na ha bia ngwa ga-oru!
Nchịkọta & Akuko
Nchịkọta ọrụ na ịkọ akụkọ na-enyere gị aka ịgbaso usoro ngosipụta ọrụ gị dị ka ọnụ ọgụgụ nke nhọpụta, afọ ojuju ndị ahịa, ahịa, arụmọrụ ndị ọrụ na ihe ndị ọzọ. Nọgide na-arụ ọrụ gị oge niile ma na-eme mkpebi ndị data na-eme iji melite usoro azụmahịa ndị a.
Bido Oge Oge
Ntọala ntọala maka azụmahịa gị na usoro atọ dị mfe:
Nịm - Tinye ọrụ na oge ọrụ. Tinye nchekwa, gbochie oge iji mepụta usoro ndụ gị.
Share - Kekọrịta ndị ahịa ibe gị URL na ndị ahịa. Tinye ya na weebụsaịtị gị, Google My Business, Instagram, Facebook na ọwa ndị ọzọ.
Nabata - Nabata ntinye akwụkwọ n'aka ndị ahịa 24 × 7. Hapụ ndị ahịa ka hazie onwe ha, hazigharịa ya, ma kagbuo maka ọdịmma ha.
Nhọpụta bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na oge nhazi oge. Site na ụdị ọnụahịa freemium, ọ na-akwado azụmaahịa niile nha. Ọ na-amalitekwa nhazi usoro ihe omume emebere emebere maka nnukwu ụlọ ọrụ / azụmaahịa iji kwado ụdị omenala ha na mkpa usoro ihe omume.
Njikere itolite azụmaahịa gị na Oge Ntinye?
Bido Oge Nnọchi Ọnwụ Oge 14!
Tags: nhọpụtahọpụtakalendanhazi oge ịntanetịnhazi oge na intanetimbugharịmbugharị emek
Creatmepụta Digital Roadmap Maka Businesszụ ahịa Na-atụ Anya